ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း
Last Date : Thu, 08/04/2022 - 14:30
၁။ အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည်။
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမည်
၁ ၉၉/မမ/ CE
ရွှေညောင်-တောင်ကြီးရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ချိန်းအမှတ် (၁၃၀၇၀) တွင် 2/20’ PC Girder တံတားအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
၂ ၁၀၀/မမ/ CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းတွင် အုတ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၂၇၁၅ ပေ) Rail pile ရိုက်ခြင်းအပါအဝင် (၉” ထု)၊ (၈-ပေ)အမြင့် အုတ်တံတိုင်းတည် ဆောက်ခြင်း၊ Rail Pile မြေဝင်အနက် (၁၀ ပေ) မှ (၁၅ ပေ) အတွင်းရိုက်ခြင်း လုပ်ငန်း
၂။ တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် (၄ . ၇ . ၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ငှင်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994
Cos Website (98-101)_2.pdf (59.88 KB)
Department Under : မြန်မာ့မီးရထား
Published: Wed, 07/06/2022 - 11:21
Last Date : Mon, 07/18/2022 - 14:30
၁ ၉၈/မမ/CE မြန်မာ့မီးရထား၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော လမ်းခင်းကျောက် (Ballast)(၃၀၀၀)ကျင်းကို ဖောင်တော်သီ ဘူတာအရောက် ဝယ်ယူရန်
Cos Website (98-101).pdf (59.88 KB)
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း
Published: Wed, 07/06/2022 - 11:15
Last Date : Thu, 07/28/2022 - 04:30
၁။ မြန်မာ့မီးရထားပိုင်၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၊ မြေညီထပ်ရှိ ရုံးခန်း (၅) ခန်းနှင့် ပထမထပ်ရှိရုံးခန်း (၁၀) ခန်း၊ စုစုပေါင်းရုံးခန်း (၁၅) ခန်း၊ စုစုပေါင်းကြမ်းခင်းဧရိယာ (၈၅၈.၇၅) စတုရန်းမီတာကို ရုံးခန်းအဖြစ် (၃) နှစ် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၊ ပထမထပ်ရှိ၊ တိုင်းတာဝန်ခံ၊ တိုင်းအမှတ် (၇)၊ ရန်ကုန် ရုံးခန်း၌ (၂၉.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဈေးပြိုင် လေလံစနစ်ဖြင့် (Open Tender)ခေါ်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ မန်နေဂျာ (စီးပွားရေး/တိုင်း)၊ တိုင်းအမှတ် (၇)၊ ရန်ကုန်ရုံး၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး (ပထမထပ်) ၌ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို (၁) စုံလျှင် (၂၀,၀၀၀/-) ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၂၀.၇.၂၀၂၂) မှ (၂၈.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့ထိ ရုံးချိန်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက၊ မန်နေဂျာ (စီးပွားရေး/တိုင်း)၊ တိုင်းအမှတ်(၇)၊ ရန်ကုန်ရုံး၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး (ပထမထပ်) သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် (၀၁- ၈၃၉၃၄၂၈၊ ၀၉ - ၇၉၄၁၇၃၀၆၅၊ ၀၉ - ၉၆၉၅၈၅၂၄၅၊ ၀၉ - ၄၃၀၁၉၂၈၂) သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ECO Tender (Station Office).pdf (77.04 KB)
Published: Mon, 07/04/2022 - 10:36
Last Date : Fri, 07/29/2022 - 14:30
၁။ အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသ
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁ 15(T)2/MR(E) Excavator with Rotary Cutter Attchment (6)Sets ဝယ်ယူရန်
၂။ တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် (၉.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့်‌ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994
Cos Website (94)၁၂၃_1.pdf (111.15 KB)
Published: Fri, 07/01/2022 - 16:47
Last Date : Wed, 07/13/2022 - 14:30
၁။ အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် -
Battery 12V 100 Ah (85)Nos
Battery 12V 200Ah (20)Nos
Acid Pail (5 gal per Pail) (42)Nos ဝယ်ယူရန်
Cos Website (94)၁၂၃_0.pdf (111.15 KB)